granatomotny Domestic AGS-40 "Balkan" (noma 6G27 ngokuvumelana Grau Inkomba) ikhiqizwa eRussia kusukela 2008. Yakhelwe njengoba izikhali ozalweni ngesisekelo ukuthuthukiswa kazwelonke - ". Imbuzi" othomathikhi amabhomu isiqalisi Lolu hlobo isikhali yakhelwe ukuqothulwa amabutho amaningi esitha, elihamba amaqoqo futhi ezilimele ezokuxhumana imigqa. Mayelana naye, futhi kuzoxoxwa ngani kulesi sihloko.
Ngesikhathi kukhulunywa AGS-40 "Balkan" kanye iqiniso lokuthi isikhali kuyisinqumo isiqalisi amabhomu, indoda abangenalwazi ngokushesha efika engqondweni iyisikhali libukeka noma RPG-7 owaziwa noma RPG-26 ijabulise.
Ngokungafani lezi tinkhulumo, amabhomu okuzenzakalelayo Sokuqalisa AGS-40 "Balkan" has oyiyo ukwesekwa, ehambisana. Ngenxa izici umlilo (cishe ekuqhumeni), isiqalisi amabhomu njalo ukunyakazisa. Ngakho-ke, phakathi ezingemuva ukwesekwa Uhlaka has isihlalo ukuze umcibisholo isisindo sakhe wasixosha isikhali emhlabathini phakathi ukudubula. Calibre ekhiqizwa igobolondo - 40 mm.
amabhomu okuzenzakalelayo Sokuqalisa AGS-40 "Balkan" futhi izici zayo
Ngokungafani ukuma wamanje behlome ngemibese amabhomu okuzenzakalelayo Sokuqalisa AGS-17 "Flame", siqhumisa projectiles 30 osezingeni, lokhu Sokuqalisa sikhombisa kuphumelela kangcono sokudubula imiphumela. Izinga AGS-40 "Balkan" has a sibalo olubabazeka kakhulu - imizuliswano 400 ngomzuzu. Okungukuthi, e umzuzu, lokhu isibhamu uyakwazi ukukhulula 400 projectiles ebulalayo, ngalinye elikwazi oziphatha njengongqingili i amabhomu kokufutheka.
amabhomu esitolo yokuhlala opholile 20 amabhomu 7P39. Lokhu caseless amagobolondo, ukusetshenziswa ubuchwepheshe obufanayo ukuba amagobolondo for amabhomu amabhomu VOG-25. Okungukuthi, abangabantwana projectile zikhishwe ekamelweni emgqonyeni izimpukane kanye amabhomu, iyingxenye yalo.
Isisindo izikhali emshinini kuyinto 32 kg. Wemigqomo obuphelele - 400 mm, uhla labadubuli ka 2,500 amamitha. Lona AGS-40 "zaseBalkan."
Sekuyisikhathi eside Russia kwaba idume ukwakhiwa kwezikhali. Inxanxathela "Balkan" yasungulwa ngawo nineties zakuqala. izakhi eziyinhloko ziye sezakhiwe ngempumelelo futhi ihlolwe esenzweni, kodwa ngenxa yesimo esinzima sezomnotho ezweni, ukuthuthukiswa engakaze ayifake inkonzo, umqondo ekukhiqizweni lihlehlisiwe. Noma mhlawumbe nje watimisela kuya ke phezu enjalo ephawulekayo "umpetha emgodini." Phela, in the "Imbuzi" umzuzwana walungisiswa ngokugcwele uqobo.
Uthe elwa "isilwane" has a osezingeni 40-milimitha nesisindo 16 kg. Ngenxa isisindo salo encane, kuba okulula ukuyiphatha, kodwa lapho labadubuli kudinga silinganiso ezengeziwe eziyinkimbinkimbi. Shoot kubo empeleni kufanele ucindezele phansi isikhali emhlabathini wonke isisindo emzimbeni.
Uma kuqhathaniswa, i-ACS-40 "Balkan" ngokushesha abatelekile isisindo - 32 kg. Nge eziya ziba zimbi imibuzo ebuzwa, ikakhulukazi kusukela esihlalweni olunikezwe Bhalobhasha ukwenza kube lula ukuba ucindezele phansi ukudubula monster. Kodwa nge zokuthutha kuyoba obuthile. Ngakolunye uhlangothi, lapho ezihambayo ngemuva isihlalo ipuleti abuts, hhayi amakhona ezisekelweni umshini.
Ngaphezu umshini, lapho igibele amabhomu ngokwayo, kungenzeka ukufaka amadivaysi ezengeziwe, ezifana emehlweni optical, okuvumela labadubuli lesifanele.
amagobolondo Ukudla kungenzeka kokubili usebenzisa itheyiphu, futhi ngokumisa umagazini ibhokisi.
Futhi kufanele ukhulume ukuthi Abaklami bendawo baye bazama isimiso caseless labadubuli, okwandisa isisindo eziqhumayo amagobolondo "Balkan" kusuka 40 amagremu kuya ku-90, ngokusho kwesitatimende by Oleg Chizhevskogo - umqondisi "Insimbi", ithela "Balkan" ne "Izhmash".
Ukuqhathanisa ne AGS-17 "Flame"
Ukuze zamukele ibutho laseSoviet ngasekuqaleni '70. Ngemva kokuwa Union wangenela inkonzo republic ahlangabezana kuzo ngezithako zawo. Asetshenziswa izingxabano eziningi zendawo lempi. Ikakhulukazi, Afghanistan.
lempi ongumpetha sasivame "run" ukubuthela ngu obstrelivaniya nalutho izinhlamvu zokukhosela, ukuze amasosha ukujwayela isimo ukulwa.
amabhomu ngokwayo umshini elikuvumela ukuba ulungise engela labadubuli futhi hit nesitha izikhundla avaliwe futhi ezingafinyeleleki: ohlangothini reverse sentsaba, kule imisele, imisele enezivikelo eziqinile, njll ...
Ngo-Afghanistan, le ndlela yokwelapha esetshenziswa AGS-17 Welding kuya hulls amathangi kanye nabasebenzi armored zenethiwekhi. Ngenxa ezinjalo "granatomotnym izidleke" kwaba elula etch le mujahideen we zokukhosela.
Isethi kufaka "amabhomu ahlakaniphile", ifakwe othole ububanzi, fuse kanye liquidator. Okungukuthi, ukubala akanayo wesabe izingcezwana projectile kusuka siqu sakhe - uma ikhona wawa amamitha esingaphansi amabili kude, ekuqhumeni kuyoba. Ngakolunye uhlangothi, amabhomu, zafinyelela kude isikhathi esingaphezu ikhilomitha, qhumisa ngokuzenzakalelayo.
Grenade kwaba elula, okusheshayo zokukhomba impi, kodwa nalapho bethutha amasosha amabili ngesilinganiso the amabhomu yasetshenziswa ukuze udonse kuye bengonozulane. Lapho kokudubula efanayo eyodwa umhlanganyeli amahlumela, omunye uhambisa cartridges futhi igcina tape.
Ngenxa design ngcono AGS-40 "Balkan" tape izinti ayisekho. Uma kunesidingo, sebenzisa ibhokisi. Futhi zokuthutha ukubhekana kalula futhi enye indoda.
Ekupheleni Ngithanda ukusho ukuthi umqondo wokudala amabhomu wokuqala emhlabeni, kwathi lapho abantu banquma amandla Grenadier - isosha, amabhomu metal.
Okokuqala othomathikhi amabhomu Sokuqalisa bavunyelwe bajikijela amabhomu phambidlana hhayi kuphela kunomuntu, kodwa futhi liqhumise. Kancane kancane kwakukhona ababethanda nangobunzima ekuqhubeni isakhiwo esinjalo. Technical wacabanga futhi intuthuko yesayensi akemi namanje.
Umholi imishini ngaphansi yinqwaba: ubuchwepheshe, izinzuzo kanye nezici
Yinqwaba ukungicika isihlenga: ubuchwepheshe, izinhlobo, indawo, ukubuyekezwa
Dream Ukuhunyushwa: ugogo washona - kungani?
Sibhedlela "Falcon Stone" (Pervouralsk): incazelo, izici kanye nokubuyekeza
Ukudoba Lake Ladoga ehlobo nasebusika